I-Ennis House-iKhaya elihlaziyiweyo kwiDowntown Ennis
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguMountain Home
UMountain Home unezimvo eziyi-538 zezinye iindawo.
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uMountain Home iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
I-bungalow entle kwaye ekhululekile kumbindi wedolophu i-Ennis ekumgama wokuhamba ukuya edolophini kunye noMlambo iMadison.
Eli khaya lilala ezine kwaye lizibhloko nje ukusuka edolophini i-Ennis.
Ikhitshi ebanzi kwaye ephezulu.
Iyadi enkulu yabucala yangasemva kunye nedesika ebanzi enendawo yokuhlala yangaphandle.
Ikhaya linesimo somoya esisembindini, ubunewunewu kuMazantsi ntshona eMontana!
INKCAZELO OMFUTSHANE: I-Ennis House ikwiibhloko ezi-2 kumzantsi weSitalato esikhulu. Inamagumbi amabini okulala ngalinye linebhedi enkulukazi kunye namagumbi okuhlambela amabini. Uya kumangaliswa ngokugqibeleleyo kukugqiba okuphezulu kunye nefenitshala. Uyakuhamba umgama wokuya kwiindawo zokutyela, iigalari, iivenkile, ukufikelela ekulobeni koluntu nokunye.
IINDLELA ZOKULALA KUNYE NEEBAFU: Kunyulwe ngokukhululekileyo ngamagumbi amabini okulala ngalinye linebhedi enkulukazi kunye neelinen ezitofotofo. Inkosi ibandakanya kunye negumbi lokuhlambela eline-ensuite enethayile, ishawa yokuhamba-hamba, igumbi lokulala elikhulu kunye nokufikelela kwipatio yangasemva. Indlu inamagumbi okuhlambela amabini agcweleyo.
IKHITSHINI: Ikhitshi entle nesandula uhlaziyo inkulu kwaye ixhotyiswe ngokupheleleyo ngazo zonke izinto oza kuzifuna ukuze ulungiselele isidlo ekhaya, kubandakanya noluhlu lwegesi.
Igumbi lokuhlala: Igumbi lokuhlala elitofotofo linendawo yokuhlala eninzi yokuhlanganisana ukubalisa amabali malunga nokufika kosuku. Upholile ukuya kwindawo yegesi emva kosuku olude emlanjeni. Kukho inkonzo yeTV yesathelayithi kwigumbi lokuhlala.
INDAWO YOKUDLA: Igumbi lokutyela livulekele zombini ikhitshi kunye negumbi lokuhlala, elilungele ukonwabisa. Izihlalo zetafile zegumbi lokutyela ezintandathu kunye nebar yesidlo sakusasa nazo ziyafumaneka kwizihlalo ezongezelelweyo. Iinketho zokutyela ezongezelelweyo ziyafumaneka kwi-patio yangasemva.
IZINTO ZANGAPHANDLE: Kukho idesika enkulu enetafile entle yokutyela kunye nezinye izihlalo ezitofotofo zangaphandle. I-grill ye-BBQ yegesi ibonelelwe ukuba uyonwabele. Kukho indawo yokupaka isitrato phambi kwendlu kunye nendawo yokupaka isitrato ngasemva kwendlu. Iyadi ibiyelwe ngokuyinxenye kwaye ibucala kakhulu.
IMISEBENZI EKUFUTSHANE: Abalobi baya kuba nezinto ezininzi zokukhetha apho bangaya khona kuquka uMlambo iMadison, iPaki yeSizwe yaseYellowstone kunye ne-Henry's Fork of the Snake River. Eminye imisebenzi emikhulu ibandakanya ukukhwela intaba, ukukhwela ibhayisekile entabeni, ukuthenga kunye nokutya kwidolophu encinci yasentshona ye-Ennis, kunye nokutyelela imbali yaseVirginia kunye neNevada City. I-Bozeman yiyure nje entle yokuqhuba ukusuka e-Ennis. Ukufumana amava angalibalekiyo kwiPaki yeSizwe yeYellowstone, bhukisha ukhenketho lwabucala!
Lo mbuki zindwendwe unezimvo eziyi-538 ngezinye indawo zokuhlala. Veza ezinye izimvo
Umbuki zindwendwe ngu- Mountain Home